နှာရည်ယို - လျင်မြန်စွာရိုးရာကုစား၏ဆက်ဆံမှု။ ဘုံအအေးနှင့်နှာခေါင်းကြောပိတ်ဆို့မှုကိုများအတွက်ရိုးရာကုစား
ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ Piggy လူကြိုက်များချက်ပြုတ်နည်းများ
နှာရည်ယို - လျင်မြန်စွာရိုးရာကုစား၏ကုသမှု, အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်
နှာခေါင်း၏ချွဲအမြှေးပါးများရောင်ရမ်းခြင်း, ငါတို့မကြာခဏအအေးမိခေါ်ဆိုပါ။ အတူထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်ဆန်းအရာအားလုံးကြုံတွေ့, ဒါပေမယ့်သင်ကရောဂါ၏သဘောသဘာဝကိုသိလျှင်ရိုးရာကုစားတစ်ဦးချမ်းအေး, ကုသအလျင်အမြန်ဖြစ်နိုင်လည်းမရှိရခြင်းမှာအကြောင်းများစွာရှိပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တောင်မှအထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများ၏ကုသမှုရလဒ်များကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
နှာရည်ယို - အကြောင်းရင်းများ
ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, အအေးမိ၏အကြောင်းတရားများအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ဤရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းဆေးတစ်ဦးလက်နက်တိုက်များအသုံးပြုမှုတိုးမြှင့်ဖို့, အသီးအသီးအထူးသဖြင့်အမှု၌သူတို့ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။ rhinitis ၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများအနက်အောက်ပါနေသောခေါင်းစဉ်:
မွေးရာပါအကြောင်းတရားများ။ သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကွဲလွဲချက်များနာတာရှည် rhinitis ၏နှာခေါင်းလိုင်နှင့်အကြောင်းမရှိ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။
ဓာတ်မတည့။ လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်လက်ရှိ rhinitis တစ်ဘုံအကြောင်းမရှိ။ တာမျိုးဟာပန်းပွင့်ထုတ်ကုန်များသာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်းမြေမှုန့်, Plus ကို, တိရစ္ဆာန် dander နှင့်အခြားအမျိုးမျိုးသောဓာတုပစ္စည်း။
ကူးစက်ရောဂါ rhinitis ။ ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ် Pathogens - မရှိသလောက်ဗိုင်းရပ်စ်များ, ဘက်တီးရီးယား, မှို။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်မားပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ painlessly တစ်ဦးနှာရည်ယိုဖြတ်သန်းရတယ်။
Adenoids နှင့်နှာခေါင်း polyps ။
သလိပ်များ rhinitis ။ ဒါကနှာရည်ယိုနေတဲ့ရှားပါးအကြောင်းမရှိသည်နှင့်ကြောင့်နှာခေါင်း mucosa ၏စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်မှပေါ်လာသည်။
Vasomotor rhinitis ။ အကြောင်းပြချက် - ထိုနှာခေါင်း mucosa များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းညှိအတွက်ချွတ်ယွင်း။
ရောဂါ၏လက္ခဏာအဖြစ်နှာခေါင်း mucosa ရောင်ခြင်း။
အခြို့သောအကြောင်းရင်းထင်ရှားသည်ထိုသို့လျှင်အအေးမိများအတွက်ရိုးရာကုစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုလျှောက်ထားရပါမည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့်အတူကုသဆရာဝန်များ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူရိုးရာချက်ပြုတ်နည်းများကိုအသုံးပြုပါ။ rhinitis ရိုးရာကုစားဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့စဉ်းစားတဲ့အခါ, အတွေ့အကြုံရှိဆရာများကသူတို့ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်စားသုံးဆီများအသုံးပြုခြင်းမှအာရုံစိုက်ရန်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်, သာ။
ဘုံအအေးနှင့်နှာခေါင်းကြောပိတ်ဆို့မှုကိုဘို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုံးပြုခြင်း, သင်ဆေးဆိုင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်သောမနှစ်မြို့ဖွယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ လူကြီးသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရိုးရာကုစား၏ကလေး၏နှာရည်ယို, ကုသမှုလျှင်, နှစ်အတွင်းသက်သေပြခြင်းနှင့်တိုင်းရင်းဆေးကိုယ်စားလှယ်များကအတည်ပြု။
Calendula ။ တာဟာသို့မဟုတ် decoctions ၏ပုံစံအတွက် nasopharynx ဆေးများအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သောဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ antibacterial အေးဂျင့်။
Hypericum စာရွက်။ စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်စိန့်ဂျွန်ရဲ့ wort လျှော်ဆည်မြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုပေမယ့်လည်းပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဘို့မသာအကြံပြုသည်အရွက်။
linden, Clover နှင့် Clover ၏ပန်းပွင့်နှင့်အရွက်များ၏တစ်ဦးကအရောအနှော။ ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောသွန်းလောင်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏တန်းတူအစိတ်အပိုင်းများ (1 Thurs ဇွန်း) ရောမွှေပါ။ နာရီဝက်ပြုတ်ရည်ဟာ nasopharynx ဆေးကြောဘို့သုံးနိုင်တယ်ပြီးနောက်။
sage ထွက်ခွာမည်။ ဖန်ခွက်တွင်, ပညာရှိအရွက်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုယူဘီယာအရက်ချက်ပေးနဲ့သူ့နှာခေါင်းကိုဆေးကြော။
Ledum palustre နှင့်စမုန်ဖြူ။ 1 tbsp ရောမွှေပါ။ ကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်,, ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောတစ်ဖန်လောင်းကဘီယာအရက်ချက်ပေးပြီး nasopharynx လျှော်ကြ၏။
rhinitis အဘို့အထိရောက်သောနှင့်သဘာရိုးရာကုစား - ရေနံ။ rhinitis ရိုးရာကုစားပျောက်ကင်းစေခြင်းနှင့်ပူးတှဲကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရရှိရန်ကူညီအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောချက်ပြုတ်နည်းများရှိပါတယ် အအေး ။ ရေနံကိုယ့်ကိုယ်ကိုချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအများကြီးပိုလွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်သင့်-Ester သုံးစွဲဖို့ကပိုထိရောက်ဖြစ်ပါသည်, မည်သည့်ဆေးဆိုင်များတွင်ရောင်းချကြသည်။
ယူကလစ်ရေနံ။ ကျွန်တော်လျင်မြန်စွာရိုးရာကုစား၏ rhinitis နှင့်ကုသမှုကဲ့သို့သောနာမကျန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်, လေထုအထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
coniferous သစ်ပင်အဆီများ။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုအားကောင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ချွဲအမြှေးပါးယားယံလျှော့ချပေးပါတယ်။
ယုံကြည်သူတို့သည်နှင့်ရိုးရာနှင့်ရိုးရာဆေးပညာမှသက်ဆိုင်ရာမြန်ဆန်နဲ့ရိုးရိုး rhinitis ရိုးရာကုစားပျောက်ကင်းစေဖို့ဘယ်လိုမေးခွန်းအဖြေများကို။ ရိုးရှင်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာနည်းလမ်းများအနက်မကြာခဏရှူရှိုက်မိပါအမျိုးမျိုးအသုံးပြုကြသည်နှာခေါင်းလက်ဆေးနှင့်သဘာဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်၏အခြေခံပေါ်မှာပေါက်ကိုပွငျဆငျနေကြသည်။ rhinitis ရိုးရာကုစား၏ကုသမှုအကောင်းဆုံးတက်ရောက်ခြင်းဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးနောက်အသုံးပြုကြသည်။
နှာခေါင်းနှင့် pharynx စဉ်းစား lavage ၏ချွဲအမြှေးပါးရောင်ခြင်း၏ကုသမှု၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံနည်းလမ်းများတစ်ခုမှာ။ လူကြိုက်အများဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဒီလိုမျိုးများထဲတွင်ရိုးရှင်းပေမယ့်ထိရောက်တဲ့ရွေးချယ်စရာခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
ဆားနှင့်ဆိုဒါနှင့်အတူနှာခေါင်း၏လက်မဆေး။ သငျသညျ, ဆား, ဆော်ဒါတစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းယူ (ပြည့်စုံဖျက်သိမ်းသည်အထိ) ကောင်းတစ်ဦးရောနှောနှင့်နှာခေါင်းကျမ်းပိုဒ်သုတ်ဖို့လိုအပ်နွေးရေတစ်ဖန်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ decoction ၏အကူအညီနှင့်အတူလက်မဆေး။ အဖြစ်ကိုပြင်ဆင်မဆိုစက်ရုံနှင့်အတူဟင်းရည်အောက်ပါအတိုင်း: ကုန်ကြမ်းတစ်ဇွန်း, ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေဖန်ခွက်လောင်းတစ်နာရီ၏လေးပုံတပုံများအတွက်ပြုတ်နှင့်အအေး။
ဤပြဿနာများအတွက် decoctions များအတွက်ကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုက်ညီနေသည်:
ရိုးရာဘုံအအေးနှင့်နှာခေါင်းကြောပိတ်ဆို့မှုကိုများအတွက်ကုစားသုံးနိုငျနှင့် nebulizer ရှူရှိုက်မိပါသုံးပြီးအဖြစ်ရှိုက်နေကြသည်ကို၎င်း, ပြုတ်ဟင်းရည်နှင့်အတူသင်္ဘောအထက်တွင်အငွေ့၏ရိုးရှင်းရှူရှိုက်မိပါ။ အဆိုပါရှူရှိုက်မိပါဖြေရှင်းချက်ပြင်ဆင်ထားရန်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သည်:
ပင်လယ် buckthorn ရေနံ;
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတခုရှူရှိုက်မိပါသို့မဟုတ် nebulizer အားဖွငျ့ပြုလျှင်, အထူး tools များမရှိဘဲဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဖို့ဘယ်လိုမရှိပြဿနာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘဲလူတိုင်းသိတယ်။ မွှန်များအတွက်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအိမ်မှာနောက်တော်သို့လိုက်ရပါမည်။
ပထမဦးစွာသင်တစ်ဦးမွှန်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ မကြာခဏကြောင့်ပင်လယ်ဆား၏ထို့အပြင်နှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်, အာလူး, သို့မဟုတ်ရေ decoctions ။
သငျသညျသဘာဝတစ်စက်ကိုသုံးပါလျှင်အအေးမိကဲ့သို့သောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရရန်, ရိုးရာကုစား၏ကုသမှုအလျင်အမြန်မိမိလက်ချက်ပြုတ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောရန်ပုံငွေများတနေ့သုံးကြိမ်တစ်ခုချင်းစီကိုနှာခေါင်း၌5ပေါက် Apply ။
အိမ်မှာအကျော်၏ပေါက်။ ယခင်က 12 နာရီပျားရည်နှင့်ရေနှင့်အတူတန်းတူအစိတ်အပိုင်းများတွင်ရောနှောခဲ့ကြသည့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဖျော်ရည်ရှားစောင်းလက်တစျခု backsheet ။
မုန္လာဥနီ-based ပေါက်။ တစျအလတ်စားမုန္လာဥနီ၏အသီးဖျော်ရည်ကိုယူသံလွင်သို့မဟုတ်နေကြာဆီနှင့်တန်းတူအစိတ်အပိုင်းများတွင်ရောနှော, ကြက်သွန်ဖြူထဲကတစ်ခုလေးညှင်းပွင့များ၏သီးဖျော်ရည်ကိုထည့်ပါ။
beet ၏အခြေခံပေါ်မှာ။ ပျားရည်နှင့်တန်းတူအစိတ်အပိုင်းများတွင်ရောနှောတဦးတည်းအလတ်စား beets ၏ဖျော်ရည်။
အရွက်၏ပေါက်။ 10 အရွက်, နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ 100 ဂရမ်တစ်ခုငွေပမာဏအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ (နေကြာသို့မဟုတ်သံလွင်) နဲ့ရောစပ်ဆယ်မိနစ်တစ်ဦးရေရေချိုးအတွက်ထားရသည်။ စစ်ထုတ်သည်နှင့်အအေး။
ပျားရည်နှင့်ကြက်သွန်နီကနေ။ ကုန်တယ်ကြက်သွန်သုံးဇွန်းပျားရည်တစ်ဇွန်းနှင့်အတူရောနှောနှင့်ခွက်ကို lukewarm ရေသွန်းလောင်း။ ကဘီယာအရက်ချက်, strain ပေးပါ။
ဒါဟာအအေးမိ၏ကုသမှု၏ရိုးရာနည်းလမ်းများလုံးဝသဘာဝအရေးဆွဲရေးဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိသည်။ ကျနော်တို့အအေးမိဖယ်ရှားပစ်ရကူညီဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းကိုယ်ခန္ဓာ၏အကာအကွယ် function ကိုတိုးတက်စေရန်အချို့အကူအညီ, အနာဂတျမှာအအေးမိရှောင်ရှားရန်ဦးမည်သာသောထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်အတတ်နိုင် options များဆက်ကပ်။
ဂျင်းနှင့်ပျားရည်ပျားရည်။ ဂျင်းအမြစ်ဆန်ခါ, တဦးတည်းသံပုရာ၏ကုန်တယ်ဇာတိပကတိအားဖြင့်ထည့်သွင်းပျားရည်နှင့်ရေခဲသေတ္တာစင်ကြယ်သောသို့သွန်းလောင်း။ အဆိုပါရရှိသောအရောအနှော၏အခြေခံတွင်ရိုးရှင်းစွာပူပြင်းတဲ့ရေခွက်ကိုမှဇွန်းတရံထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဆေးဖက်ဝင်သောက်ခဲ့ပါတယ်။
အမှောင်ဆပ်ပြာ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င်: လက်မ lather နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှရောက်ရှိစီနှာခေါငျးချောဆီ။
ရေနံဆီ (ပြင်ပ application) ။ ရေနံဆီခြေချောဆီနှင့်နွေးထွေးသောခြေအိတ်နှစ်ခုအားလုံးအတွက်၏ထိပ်ပေါ်မှာထားတော်မူ၏။ နေ့ချင်းညချင်းရပ်တည်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
Compote Currant ။ Currant compote ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းချက်ပြုတ်, နှင့်မျှမတို့ထက်ပိုမို4ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ကိုသောက်လော့။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ပျားရည်ထည့်နိုင်သည်။
လတ်ဆတ်တဲ့ horseradish ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်စီနှာခေါင်း၌တစ်ဦး grater အပေါ်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရအကြိမ်ပေါင်းများစွာ horseradish, အသက်ရှူ။
အပူပိုင်းမုန်ညင်း (Topic) ။ ဝါဂွမ်းခြေအိတ်၌အိပ်ပျော်မသွားမီတစျခုထက်ပိုခြေအိတ် (- သိုးမွှေးပိုကောင်း) ၏ထိပ်ပေါ်မှာထားပြီးလျှင်, မုန်ညင်းတစ်ဇွန်းသွန်းလောင်းလေ၏။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုခြေပေါ်အသားအရေကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်။
အလွန်ကောင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်, အအေးမိအဘို့အဘယ်သို့အထိရောက်ဆုံးရိုးရာဆေးတစ်လက်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ဒါမလွယ်ကူပါဘူး, အခြားများအတွက်အဖြစ်ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ မှန်မှန်ရိုးရာဆေးပညာ၏နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုဖို့သူမြား၏တုံ့ပြန်မှုကိုလေ့လာဘဲလျက်, တကနှာရည်ယိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းအချို့ကိုခွဲဝေချထားပေးရန်မှနေဆဲဖြစ်နိုင်, ယေဘုယျလက်ခံမှုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အလျင်အမြန်နာကျင်လက္ခဏာတွေဖယ်ရှားပစ်ရရိုးရာကုစား၏ကုသမှု - ဤရန်ပုံငွေများကိုတစ်ဦးနှာရည်ယိုရှိသူတို့ကကူညီပါလိမ့်မယ်။
Kalanchoe ဖျော်ရည်။ အရွက်ကနေ Kalanchoe ၏ မည်သည့်ရရှိနိုင်နည်းလမ်းများရည်ကို extract နှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှာခေါင်း၌ 203 ပေါက်မှာသင်ျဂွိုဟျ။
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ပျားရည်။ minced ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ပျားရည်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းကို ယူ. ရေနွေးတစ်ဝက်တစ်ဖန်သွန်းလောင်း။ ကဘီယာအရက်ချက်နှင့် strain ပေးပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှာခေါင်း၌အနည်းငယ်ကျဆင်းလာတနေ့သုံးကြိမ်ယို။
ပျားရည်နှင့်အတူကြက်သွန်နီ ။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်တဦးတည်းမီးသီးများ၏သီးဖျော်ရည်ကိုနှာခေါင်းသို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်အနည်းငယ် (ကျွန်မပါးလွှာခဲ့ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု) ကိုရေနှင့်ယိုကိုထည့်သွင်း, အရည်ပျားရည်၏တူညီသောငွေပမာဏနှင့်အတူရောနှောဖြစ်ပါတယ်။
စမုန်နက် - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
ရိုင်းအမြစ်ထ - လျှောက်လွှာ
Psoriasis celandine ၏ကုသမှု
သံပုရာရေနံ - ဘာအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်မည်သို့အလှကုန်များနှင့်ရိုးရာဆေးပညာအတွက်လျှောက်ထားရန်?
ကျောက်ခေတ်ကရေနံ - ၏အသုံးပြုမှု
အဆိုပါ pion ၏ Tincture - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
25 ထူးဆန်းတဲ့နှင့် unexplained နတ်မင်းကြီးဖြစ်ရပ်
စူပါ "လူလတ်ပိုင်း" ဟုအသံ "အဘယ်သူမျှမ!" Ageism ကပြောပါတယ်
Bang 2016 နှင့်အတူခေါင်းဖီး
စပျစ်ဥယျာဉ်ထဲမှာ WASP ပိုးမွှားထိန်းချုပ်မှု
စာရွက် - ပျင်းရိများအတွက်ဂေါ်ဖီထုပ်ပိုင်
Kronos - Kronos နှင့်သူ၏သားသမီးများ၏ဒဏ္ဍာရီ
တစ်ဦးပွဲလမ်းသဘင်စားပွဲပေါ် Mayonnaise မပါဘဲသုပ်
မြက်ခင်းမြက် - အခါ, စိုက်ပျိုးနည်း
အုန်းသီးရေနံ - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
အဆိုပါသော့ကိုထိန်းကျောင်းနေခြင်း - curly ဆံပင်တစ်မျက်နှာဖုံး
ကလေးများအတွက် Cytomegalovirus ရောဂါကူးစက်